Indlela Yokufundisa I-Continuous Present to ESL Students
Ukufundisa okuqhubekayo okwenzekayo ngokuqhelekileyo kwenzeka emva kokuba iifom ezikhoyo zangaphambili, ezidlulileyo kunye nezizayo ziqalisiwe. Nangona kunjalo, ezininzi iincwadi kunye neekharityhulam zikhetha ukuzisa oku kuqhubekayo ngokukhawuleza emva koku Lo myalelo ungadideka njengoko abafundi banokuba neengxaki ekuqondeni ubuqili bezinto ezenzekayo njengesiqhelo kunye nesenzo esithatha indawo ngexesha lokuthetha.
Kungakhathaliseki ukuba uqalise eli xesha, kubalulekile ukubonelela imeko eninzi ngokusemandleni ngokusebenzisa amaxesha afanelekileyo , njengamanje, okwangoku, okwangoku, njl njl.
Indlela yokwazisa i-Current Continuous
Qala ngeModeling ye-Continuous Current
Qalisa ukufundisa oku ngokuqhubekayo ngokuthetha ngento eyenzeka eklasini ngexesha lokusungulwa. Xa abafundi beqaphela le ntsebenzo, bandise kwezinye izinto owaziyo ezenzekayo ngoku. Oku kungaquka iinkcukacha ezilula ezifana neLanga likhanya ngelixa. Sifunda isiNgesi ngeli xesha. njl. Qinisekisa ukuyixuba ngokusebenzisa inombolo yezifundo ezahlukeneyo.
Ndiyifundisa ngoku ngokuqhubekayo ngoku ngoku.
Umkami usebenza eofisini lakhe okwangoku.
Abo bafana badlala ithenesi ngaphaya kwalo.
Khetha iphepha okanye iphepha lewebhu elinomsebenzi omningi, hamba kumanani amaninzi, uze ubuze abafundi imibuzo ngokusekelwe kwisithombeni.
Benza ntoni ngoku?
Yintoni ebambe esandleni sakhe?
Yiyiphi imidlalo abayidlalayo?
Ukufundisa ifomu engafanelekanga, sebenzisa umagazini okanye amawebhsayithi ukubuza ewe okanye akukho mbuzo ejolise ekucebiseni impendulo engalunganga. Unokufuna ukumisela imimiselo embalwa ngaphambi kokubuza abafundi.
Ngaba udlala itennis? - Hayi, ayidlala i-tennis. Udlala igalofu.
Ngaba unxibe izicathulo? - Hayi, ugqoke amabhuthi.
(Ukucela abafundi) Ngaba bayadla isidlo sasemini?
Ngaba uqhuba imoto?
Emva kokuba abafundi beqhelana nemibuzo embalwa, bahambisa amaphephancwadi okanye ezinye iifoto ezijikelezayo eklasini baze bacele abafundi ukuba baxhamle into eyenzekayo okwangoku.
Indlela yokuziqhuba ngokuqhubekayo
Ukuchaza okuqhubekayo kwiBhodi
Sebenzisa isalathisi esilungeleyo samanje ukubonisa ukuba into eqhubekayo isetyenziswa ukubonisa oko kwenzekayo okwangoku. Ukuba uziva ukhululekile kunye nezinga leklasini, qalisa ingcamango yokuba ukuqhubeka okukhoyo kungasetyenziselwa ukuthetha malunga nento eyenzeka malunga nomzuzu wamanje ngexesha. Ingcamango enhle kweli nqanaba ukuchasanisa isenzi esinokoqobo esiqhubekayo 'sokuba' kunye nezinye izenzi ezixhasayo , ebonisa ukuba 'ing' kufuneka ifakwe kwisenzi kwisimo esiqhubekayo samanje .
Imisebenzi yokuqondisisa ezifana nokusebenzisa iifoto kumaphephancwadi iza kunceda ngokuqhubekayo. Ukuqhuba iingxoxo eziqhubekayo kunokukunceda ukubonisa ifom. Ukunikezela kwamaphepha okusebenzela okuqhubekayo kuya kuncedisa ukubopha kwifomu ngamaxesha afanelekileyo. Ukubuyiselwa kwemibuzo eyahlukileyo ekhoyo ekhoyo ngoku kunye nokuqhubekayo kuya kunceda.
Ingqondo efanelekileyo ukuthelekisa nokwahlukana nokuqhubekayo okwangoku kunye nefom elula nje xa abafundi beqonda ukuhluka.
Ukusebenzisa oku ngokuqhubekayo kwezinye iinjongo ezifana nokuxoxisana ngeeprojekthi ezikhoyo emsebenzini okanye ukuthetha ngeentlanganiso eziza kuqhutywa zizayo kuya kunceda abafundi baqhelane nezinye iifom zefomu eqhubekayo.
Iingxaki malunga neNkqubo eqhubekayo
Umngeni omkhulu kunoko uqhubekayo uqonda umahluko phakathi kwesenzo esiqhelekileyo ( esilula lula ) kunye nomsebenzi okwenzekayo okwangoku. Kuqhelekile ukuba abafundi basebenzise ngokuqhubekayo ukuthetha ngemikhwa yansuku zonke xa befunde le fomu, ngoko ukuthelekisa iifom ezimbini kusenokwenzeka kuya kunceda abafundi baqonde ukungafani. Ukusetyenziswa kwenkcazo eqhubekayo yokubonisa imicimbi yeziganeko eziza kusasa kukushiya kwiiklasi eziphakathi. Ekugqibeleni, abafundi banokuba nobunzima bokuqonda ukuba izenzi zentetho zingasetyenziswanga ngeefom eziqhubekayo .
IsiCwangciso seSifundo esiQhubekayo soMzekelo Isibonelo
Bulisani kwiklasi uze uthethe malunga nento eyenzekayo kwangoko kwiklasi. Qinisekisa ukupakisha izivakalisi zakho ngamaxesha afanelekileyo anjengokuthi 'ngelixa' kunye 'ngoku'.
Buza abafundi ukuba benzani okwangoku ukuba bancede baqale ukusebenzisa ifom. Kule nqanaba kwisifundo, gcina izinto ezilula ngokungahambi ngegrama. Zama ukufumana abafundi ukuba banikele iimpendulo ezichanekileyo ngendlela exoxwa ngayo.
Sebenzisa iphephancwadi okanye ufumane imifanekiso kwi-Intanethi uze uxoxe ngezinto ezenzekayo kumfanekiso.
Njengoko uxoxa ngezinto azenzayo okanye ezenzayo kwiifoto, qalisa ukwahlukana ngokubuza imibuzo 'kunye' kunye 'nathi'.
Ekupheleni kwesi ngxoxo, bhala umzekelo ombalwa kwizivakalisi ebhodini elimhlophe. Qinisekisa ukusebenzisa izifundo ezahlukeneyo kwaye ubuze abafundi ukuba babone ukungafani phakathi kwesigwebo ngasinye okanye umbuzo.
Khangela isenzi esenziwayo 'sibe' utshintsho, kodwa qaphela ukuba isenzi esona (ukudlala, ukutya, ukubukela, njl.
Qalisa ukuqhathanisa oku kuqhubekayo kunye nekhoyo ngoku ngokukhetha imibuzo. Umzekelo: Yintoni umhlobo wakho oyenzayo okwangoku? Uphi umhlobo wakho ahlala khona?
Fumana igalelo lomfundi kwimibono phakathi kweefom ezimbini. Nceda abafundi baqonde njengoko kuyimfuneko. Qinisekisa ukuba ubonisa ukungafani ngexesha lokusetyenziswa kwegama phakathi kweefom ezimbini.
Buza abafundi ukuba babhale imibuzo elishumi, ezintlanu kunye nokuqhubekayo kunye nezihlanu ezikhoyo ngoku zilula. Hambisa malunga negumbi kunceda abafundi banoma bunzima.
Yiba nabafundi abaxoxisana nabo ngokusebenzisa imibuzo elishumi.
Umsebenzi wesikolo, cela abafundi ukuba babhale umhlathi omfutshane ohluke oko umhlobo okanye ilungu lentsapho elenzayo imihla ngemihla kunye nento abakwenzayo okwangoku. Mzekelo izivakalisi ezimbalwa ebhodini ukwenzela ukuba abafundi baqonde ngokucacileyo umsebenzi wesikolo.
Ukubhengezwa kwegama - Ukusebenzisa uxinzelelo kunye nokukhankanya kwiSigaba se-ESL
Indlela yokufundisa u-Essay Ukubhala
Indlela Yokufundisa Okulula Kwanje
I-Basic Curriculum yesiNgesi yokufundisa ESL - igrama
Indlela yokudala iKharityhulam yeKlasi yeKlasi
Izidumi ezikhuluma ngesiFrentshi
Ukuthetha ngeeholide ngesiNgesi
Intelligences ezininzi kwiSigaba se-ESL
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweMelacule kunye neCompound?
Iincwadi zeBeatles 'kuphela zeJamani
I-Hyundai Equus ifoto yegalari
Iimpawu zemiDlalo yamahhala kwi-PowerPoint
I-Object Direct ichaza ngesiTaliyane
I-KAMINSKI - Igama lokugqibela kunye nomvelaphi
UFlorence Knoll, uMyili weCandelo leBhodi leNkampani
Ishicilelo seSiraphu sokuprinta
Ukuhlalutya 'Indlela Yokuthetha Nomzingeli' ngoPam Houston
Ukuhlaziywa kwe-Honda Fury 2010
2016 I-Ford Explorer Igalari yezithombe
Uzbekistan | Iinkcukacha kunye neMbali
Iiprojekthi zokuLawula ngeSithuthuthu
Inkcazo yeNuclide yomzali
Iinkcukacha Ezifutshane NgoBeorge Bernard Life and Plays
Agasti - Ukunyuka kwamandla
Indlela yokulungisa iimpazamo kwaye wenze iinguqu kwi-watercolor
Ukubambisa Isiqhamo Sentsikelelo Yabantwana Abantsha